Free MOV Ntụgharị
> Resource> Free> Top 5 free MOV Ntụgharị
Ọtụtụ ndị mmadụ na n'anya na-ekiri fim na ha mobile ngwaọrụ, iPads, mbadamba na Android dabeere ngwaọrụ. Ihe ịma aka bụ ndị a na ngwaọrụ akwado iche iche mgbasa ozi faịlụ formats, n'ihi ya ị na-ahụ dị iche iche njehie ozi na ngwaọrụ gị mgbe ị na-agbalị na-egwu a faịlụ. Ozi dị ka "File Format anaghị akwado" ma ọ bụ "ghara ịdị irè File format" abụghị obere. Nke a na-emesi mkpa nke a nkiri Ntụgharị.
A nkiri Ntụgharị bụ a software na-atọghata ndị faịlụ Ọkpụkpọ (Movie File, ke idaha) si ẹdude usoro a chọrọ format nke ike-egwuri site ngwaọrụ. Akakabarede usoro bụ a dịghị brainer usoro dị ka ọbụna a 3rd grader nwere ike igbu ya. Lee ndị top ise free nkiri converters nke ga-tọghata gị nkiri faịlụ ka dị nnọọ ọ bụla usoro, playable ọ bụla na ngwaọrụ.
Koyote Free Video Ntụgharị
Ebe a na-nkọwa ndị ọzọ na-akwanyere ndị a ngwa na ha atụmatụ.
Wondershare Video Ntụgharị bụ a software na e mepụtara na-enye ọrụ na ahụkebe ahụmahụ na-akwanyere converting videos. Ọ na-ekwe maka akakabarede na-ere ọkụ nke n'ụlọ DVD, na nbudata na edezi nke videos. Ọ na-enye a dum ahụmahụ ọhụrụ na-akwanyere video akakabarede. Ebe a na-ọzọ nke ya atụmatụ.
Rụrụ ruo iri atọ ugboro ngwa ngwa dị ka tụnyere ndị ọzọ converters
Atọghata vidiyo na n'elu 150 formats (ASF, AVI, MP4, mpg, aku, MOV, FLV, wdg)
Ọtụtụ ọdịyo mmepụta formats dị. (MP3, M4A, AC3, AAC, WMA, wdg)
Ọkụ DVD disks ma ọ bụ DVD nchekwa
Ọ na-onwem na ezigbo desktọọpụ ọkpụkpọ.
Interactive na onye ọrụ-enyi na enyi interface.
Koyote Free Video Ntụgharị (Windows)
Nke a bụ free ọrụ enyi na enyi video Ntụgharị na ike ga-eji iji tọghata video faịlụ ka chọrọ usoro. Ya na-apụta formats bụ avi, mp4, 3gp, DVD, flv na WMV formats. N'ihi na videos nke ị ga-achọ na na na iPads, iPods na iPhones, Koyote Free Video Ntụgharị abịa kemfe ịrụ akakabarede mkpa. Iji a software dị mfe, dị nnọọ họrọ faịlụ gị mkpa iji tọghata, họrọ gị chọrọ format ma ọ bụ ngwaọrụ nke ị chọrọ na-ekiri ya na pịa "tọghata Video" button. Ọ bụ ndị dị otú ahụ a dị mfe ma hassle free usoro. Gị faịlụ na-converted ngwa ngwa na ị nwere ike mfe ịhụchalụ ha.
Anya isi na ị nwere ụfọdụ video akụkụ nke ị chọrọ dezie, koyote Free Video Ntụgharị nwere ndị dị otú arụmọrụ na-enye ohere maka mmịpụta na edezi nke akụkụ ụfọdụ nke video. Nke a software n'ezie mepụtara gafere nkwurịta okwu ókè dị ka ọ na-akwado nza nke asụsụ maka a ahaziri ọrụ.
Freemake Video Ntụgharị bụ ihe ọzọ na free video Ntụgharị software na anyị na ndepụta na-anapụta a pụrụ iche ahịa ahụmahụ. Ọ e mepụtara na-enweghị zoro ezo na-eri na-agaghị emeli, àjà a àgwà ọzọ ka na-akwụ ụgwọ na ngwaahịa. Na-eji nke a software, ị nwere ike ọsọ ọsọ ọ bụla video format, sitere na site avi, mp4, mkp, WMV ka MOV, ọdịyo faịlụ na mp3, AAC, wam na ọbụna foto na tọghata ha ọ bụla chọrọ usoro. Ike nke a software dị ọtụtụ. Ụfọdụ n'ime video mmepụta format agụnye AVI, MPEG, MKV, FLV, 3GP na nza ọzọ. Ndị ọzọ na atụmatụ nke Freemake Video Ntụgharị agụnye;
Bulite ike nke foto na MP3 faịlụ ka YouTube
Ndinam slide na na visualisations
Onye dị elu tupu set nchịkọta akụkọ.
Nke a bụ software na e mepụtara na ihe ndị magburu onwe iwu-akara video akakabarede ngwá ọrụ nke bụ otu Linux arụ ọrụ usoro. Na ngwá ọrụ a, ọtụtụ faịlụ na videos nwere ike converted si otu faịlụ Ọkpụkpọ ka a chọrọ otu. Ebe a bụ ụfọdụ nke video faịlụ formats na dị. AVI, FLV, M4V, MKV, MOV, MP4, mpg, OGG, OGV, RM, SWF, TP, TS, WEBM, WMV na nza ọzọ. N'ihi na ọdịyo faịlụ, 3G2, 3GP, AAC, AC3, ADPCM, AIFF, AU, FLAC, GSM, M4A, MP3, MP4, OGG, PCM, RA, VORBIS, ife, WMA na nza ọzọ bụ na-akwado formats.
Clipconverter bụ a free online media faịlụ Ntụgharị na nwekwara ike-eji ibudata site video nkekọrịta saịtị dị ka YouTube, Myspace na Daily Motion. Ọ dị mfe iji dị ka ihe niile ị chọrọ ime bụ Tapawa URL nke faịlụ ịchọrọ ibudata na textbox na pịa-anọgide na bọtịnụ. Usoro nwere ike iri oge ụfọdụ mgbe nke ị nwere ike ibudata converted faịlụ.
Were uru nke ndị a faịlụ na nnọọ akpụ na-agaghị emeli metụtara ihe dị iche na faịlụ formats na-akwanyere ọkacha mmasị gị gadget.